I-Happy Nation ompetha abasha | News24
I-Happy Nation ompetha abasha
ISITHOMBE: sithunyelweIqembu elidle umhlanganiso i-Happy Nation.
IQEMBU lebhola lezinyawo i-Happy Nation lasendaweni yase-Redlands Farm lingompetha abasha be-Freedom Month Tournament nebeyenzeka okokuqala ngqa ngoMgqibelo mhla zili-13 kuMbasa (April) eMbali Unit BB5.
Lokhu kulandela ngemuva kokuba leli qembu libhaxabule i-Ombuso Entertainment ngama-goli amabili kwelilodwa kowamanqamu.
Leli qembu liwine ijezi lebhola. Lo mncintiswano ubuhlelwe uMnu David Ndlovu kanti bekungokokuqala ngqa ukuthi udlalwe kulonyaka. Ngokusho kukaNdlovu inhloso yalomncintiswano ukuhlanganisa intsha ndawonye yenze into elungile iphinde iveze nethalente layo.
“Besinamaqembu ali-15 akade engenele lomncintiswano.
“Ngijabulile kakhulu ngento engiyibonile. Izingane ziveze amathalente azo amakhulu ekudlalweni kwebhola lezinyawo kanti nginethemba lokuthi abanye babadlali baya kude emdlalweni webhola lezinyawo. Lomncintiswano sesizoqhubeka[nawo] ukuthi ube into yaminyaka yonke,” kubeka yena.
UMnu Ndlovu ubonge kakhulu abaxhasi balo mncintiswano Indalo Health (Dr Buthelezi), aQuellé, Pitstop garage kanye ne-Redlands Farm.